Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii OYSU North America oo malinki 3aad galay si heer sare ahna u socda
Shirkii OYSU North America oo malinki 3aad galay si heer sare ahna u socda
Waxaa maanta oo axada galay maalin seddexaadkii ee shir sanadeedkii North America
Shirka oo ay u jeeddadiisu tahay qadiyada dadka dulman loogu miciino ayay dhallin aad u tiro badan isku arken Oo ka kala yimid Gobolo kala duwan. Waxaa la gudo galay mawduuc shireedkii iyaga oo ay dhallintu soo bandhigeen Waxqabadkii sanadkii la soo dhaafay iyo waxyaabihii ay soo qabteen iyo waliba qacabadikii ka horyimid intii sanadka gudihiisa ahayd.
Waxaa ugu horayn bilaabay xoghayaha Gobolka Minnesota mudabe Mohamed Hassan ( yoocaale)
Wuxuuna dulmaray waxqabadkii sanadkii la soo dhafay iyo abaabulkii ay gobolada kale ku marayeen.waxana ugu danbeeyay Mudaharaadkii CAMP DAVID oo aan wakhti koban ku soo gabagabaynay fogaan dheera aan aan ku maray.Waxaa lagu soo dhaweeyey seattle dhallintii ka socotay horjoogahoodii mudane jabarti ismaaciil baynah Wuxuuna madasha ka sheegay in seattle dhallinteedu ay cusub tahay lana aas aaasay may 19 hadana anaga oo bil jira aanu xubno aad u badan isu keenay waxaanad ku garan kartaan buu yiri waxa qabadkanaga waxaad ka garan kartaan ka soo qayb galka shirka. Wuxuu mudanuhu sheegay oo kale in ay mudaharaad aad u ballaaran oo gumaysiga lagaga soo horjeeday aan ka qayb galnay.
Waxaa kale uu sheegay in ay la kulmeen madax sarsare oo aqalka cad ka tirsan.
Waxaa kale oo iyana meeja ka hadashay ku xigeenka xoghayaha San Diego marwo farah Mohamed
Waxayna soo bandhigtay video clip aad u qiiro badan iyo waliba walk to genocide oo aa muhiim u ahaa Waxaa kale isna cashir aad muhiim ah soojeediyay mudane abdi farah aadna loga yaqaano Gobalka Minnesota iyo meela kalaba Wuxuuna milicsaday sooyaalkii gumaysi iyo raadadkuu ka tagay Isku soo wada duuboo wixii faah faahina gadaal ayan idiinka soo diraynaa
Warkan waxa soo gudbiyay Maamulka Ururka dhalinta OYSU.